को हुन् भारतीय टेस्ट टिमका नयाँ सदस्य पृथ्वी शा ? – WicketNepal
को हुन् भारतीय टेस्ट टिमका नयाँ सदस्य पृथ्वी शा ?
Birat Jung Rayamajhi, २०७५ भाद्र ७, बिहीबार १५:२८
विकेटनेपाल, भदौ ७ बिहिवार
भारत र इंग्ल्याण्ड बीच जारि टेस्ट शृंखला अन्तर्गत तेश्रो टेस्टमा जित पछि सिरिजमा भारत २-१ ले पछि छ। २ टेस्ट बाँकी रहंदा शृंखला कसले जित्ला भन्ने रोमान्चकता त छदैछ तर एउटा अर्को प्रसंग यति बेला अझ चर्चाको बिषय बनेको छ। सिरिजमा खेल्न बाँकी २ टेस्टको लागि भारतले टिमको नाम सार्वजनिक गर्दा १८ बर्ष २८६ दिन उमेर भएका पृथ्वी शालाई मुरली विजयको सट्टा टिममा स्थान दिईएपछि यति बेला पृथ्वीबारे सबैमा जिज्ञाशा जागेको छ। को हुन् पृथ्वी शा ?
सानैमा शोक : ४ बर्षको उमेरमा आफ्नो आमालाई गुमाएका पृथ्वीलाई उनको पिताले क्रिकेट खेलको लागि सधै उत्साह दिने गर्थे। प्रत्येक दिन डेढ घण्टा ट्रेनमा यात्रा गर्दै उनका पिताले मुम्बई बान्द्रामा अभ्यासको लागि लैजाने गर्थे। उनको बुवाले छोराको क्रिकेटर बन्ने सपना पुरा गर्न आफ्नो ब्यबसाय सम्म बन्द गरेका थिए।
सचिन आदर्श, सचिनकै बाटोमा : सचिन तेन्दुलकरलाई आफ्नो आदर्श मान्ने दायाँ हाते ब्याट्सम्यानको शारीरिक उचाई सचिनकै जति ५.५ फिट रहेको छ सचिनकै स्तरको खेलाडी हुने आंकलन समेत गर्न थालिएको छ।
आफ्नै कप्तानी यु-१९ बिश्वकपको उपाधि : भारतलाई चौथो पटक यु-१९ बिश्वकपको उपाधि दिलाउने क्रममा शाले कप्तानी मात्रै हैन ब्याटिंगमा पनि उत्कृस्ट प्रदर्शन गरेका थिए। प्रतियोगितामा उनले ६ खेलको ५ इनिंगमा २६१ रन बनाएका थिए जुन क्रममा २ वटा अर्धशतक प्रहार गरेका थिए। ओपनिङ्ग ब्याटिंग गरेका उनले समुह चरणमा अस्ट्रेलियालाई पराजित गर्न ९४ रनको शानदार इनिंग खेलेका थिए। यस्तै क्वार्टरफाइनलमा बंगलादेशसंग ४० तथा सेमीफाइनलमा पाकिस्तानसंग ४१ रन बनाएका थिए।
आईपीएल यात्रा : भारतलाई यु-१९ बिश्वकप जिताएपछि उनलाई आईपीएल टिम दिल्ली डेयर डेभिल्सले १.२ करोड भारतीय रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो। आईपीएलमा उनले कोलकातासंग ६२ रन, राजस्थानसंग ४७ तथा हैदराबादसंग ६५ रनको इनिंग खेल्दै प्रभाव छोड्न सफल भएका थिए।
भारतले घोषणा गरेको बाँकी २ टेस्ट टिममा हनुमा बिहारी पनि अर्को नयाँ नाम रहेको छ। बिहारीले कुलदिप यादबलाई तथा शाले मुरली विजयको ठाउँ लिनेछन्। बिहारी प्रथम श्रेणी क्रिकेटमा उत्कृस्ट लयमा रहेका छन् जसले ६३ खेलको ९७ इनिंगमा ५९.७९ को औशतले ५१४२ रन बनाईसकेका छन्। वर्तमान प्रथम श्रेणी क्रिकेटमा बिश्वमै बिहारीको जति औशत अरु खेलाडीको छैन, उनि पछि अस्ट्रेलियन पुर्व कप्तान स्टिभ स्मिथको टेस्ट औशत दोश्रो बढी ५७.२७ रहेको छ।
तेश्रो र चौथों टेस्टको लागि घोषित भारतीय टिम :- बिराट कोहली ( कप्तान ), अजिंके रहाने, केएल राहुल, शिखर धवन, पृथ्वी शा, चेतेश्वर पुजारा, हनुमा बिहारी, करुन नायर, दिनेश कार्तिक, रिशभ पन्त, हार्दिक पान्ड्या, आर आश्विन, रबिन्द्र जडेजा, उमेश यादब, इशान्त शर्मा, मोहम्मद शमि, जस्प्रित बुम्रा, शार्दुल ठाकुर